Gareth Bale Oo Saddexleey Dhaliyay Xilli Spurs Ay Dhulka Ku Jiiday Sheffield United – Garsoore Sports
Gareth Bale Oo…
Kaddib Seddexleydiisii ugu horreysay muddo sagaal sanno ah, Gareth Bale ayaa dhaafay 50 gool oo Premier League ah iyadoo bandhigiisii kulankii ka dhacay waqooyiga London uu sabab u noqday inay kooxdisa Tottenham sii nooleyso rajadooda affarta sare ah kaddib cayaar 4:0 kusoo idlaatay oo ay ku dardareen kooxda Sheffield United.
Bale ayaa kooxdiisa Spurs oo dhowaan laga qaaday koobka EFL cup-ka ka dhigay mid cayaarta gacanta ku heysa kahor dhammaadka qeybtii hore, isagoo si xamaasad leh u dhaliyay goolkiisii nus qarniga ee PL-GA, kaddib shaqo fiican oo uu ka helay Son Heung-min.
Bale ayaa Jibbaaray goolashiisa isagoo dhaliyay goolkiisa labbaad ee cayaarta kaddib markii uu helay baaska Son isagoo ku sugan diilinta ganaaxa markaasoo uu si fiican dhinac sare ula eegtay shabaqa.
Ciyaaryahanka amaahda ugu maqan kooxda Real Madrid ayaa dhammeystiray seddexleeydiisa isagoo goolkiisii 3aad ka dhaliyay meel hoose oo diilinta ganaaxa ah kahor inta uusan Son dhalinin goolkii 4aad ee cayaarta iyadoo uu si qurux badan ugasoo laaday meel ka baxsan 20 yaardi goosha kooxda Sheffield si uu cayaarta ugu maamuuso qaab-cayaareed wanaagsan.
Kooxda martida ahayd ee Sheffield ayaa kaliya hal jeer badisay 26-kii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League-ga oo ay ku cayaareen London waxaana goolhaye Aaron Ramsdale uu dhigay rikoor 27 kulan oo xiriir ah oo uu ku billowdo goosha isaga oo aan ilaashan shabaqiisa.